Horudhac: Sevilla vs Barcelona… (Miyey Barca u babac dhigi kartaa dardarta Sevilla) – Gool FM
Haaruun February 27, 2021
(Seville) 27 Feb 2021. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa maqribnimada xilliga geeska Afrika booqan doonta kooxda Sevilla kulan xiiso gaar ah xambaarsan oo ka tirsan horyaalka La Liga.
Barca ayaa laba dhibcood ka sarreysa Sevilla ka hor kulankan inkastoo ay hal kulan gacanta ku heysato kooxda hooseysa.
Labadan koox oo ku kala jira boosaska saddexaad iyo afaraad ayaa kulankii Camp Nou ka dhacay ee wajigii hore ee xilli ciyaareedkan kusoo kala baxay barbarro 1-1.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 6:15 Maqribnimo xilliga geeska Afrika.
Garoonka: Ramon Sanchez Pizjuan
Garsooraha:Alejandro Hernandez (Spain)
Ma jiro dhaawac ama ganaax cusub oo ay wajaheyso Sevilla kulankan inkastoo ay ciyaartan dhaawacyo ay hore u qabeen ku seegayaan xiddigaha kala ah Marcos Acuna iyo Lucas Ocampos.
Ronald Araujo ayaa shaki laga gelinayaa ciyaartan isagoo kasoo kabanaya dhaawac anqowga kasoo gaaray horraan, balse waxaa guud ahaanba kulankan aanan qayb ka ahayn Ansu Fati, Philippe Coutinho iyo Sergi Roberto kuwaasoo dhammaantood dhaawacyo kaga maqan Barcelona.
Sevilla ayaa guul gaartay lixdii kulan ee ugu dambeysay La Liga, taasoo ka saacidday inay soo galaan safka ugu horreeya ee kala sarreynta horyaalka.
Sevilla ayaa shabaqeeda gool ka ilaalisay siddeed ka mid ah sagaalkii kulan ee ugu dambeysay dhammaan tartammada waxaana ku jira guushii 2-0 ahayd oo ay Barca kaga gaareen tartanka Copa del Rey lugta hore ee wareegga Semi-finalka.
Naadiga martida loo yahay maanta ayaa shabaqeeda gool ka ilaalisay shantii kulan ee ugu dambeysay horyaalka La Liga.
Barcelona ayaa si xiriir ah guul u gaartay lixdii kulan ee ugu dambeysay oo ay bannaanka kusoo ciyaareen horyaalka La Liga.
Balse Barca ayaa gaartay kaliya labo guul shantii kulan ee ugu dambeysay dhammaan tartammada, waxaana guuldarrooyinka soo gaaray ka mid ah tii ay kala kulmeen kooxda ay maanta martida u yihiin ee Sevilla tartanka Copa del Rey.
Barcelona ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool toddobo ka mid ah siddeeddii kulan ee ugu dambeysay La Liga.
Horudhac: Manchester City vs West Ham United... (Miyuu ciyaari doonaa Sergio Aguero?)